समृद्ध नेपालको लागि कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली लागु गर्न पर्छ : डा. बाबुराम भट्टराई – JANAMATPOST.COM :: NEWS FOR ALL
२०७४, १ पुष शनिबार ०५:१४
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई
तिनै भट्टराईसँग चुनावी परिणाम, उनी नेतृत्वको नयाँशक्तिको सफलता–असफलता, वामगठबन्धनबाट नयाँशक्ति किन र कसरी बाहिरियो, कांग्रेससँगको चुनावी सहकार्य कस्तो रह्यो, भट्टराईले हिँड्न खोजेको आगामी बाटो के हो भन्ने प्रश्नमा शुक्रबार बिहान काठमाडौंमा लामो वार्ता गरे। प्रस्तुत छ, भट्टराईसँगको वार्ताको संपादित अंशः
वामगठबन्धनले यति ठूलो चुनावी सफलता प्राप्त गर्नुको कारण के होला?
जनता लामो अस्थिरताबाट वाक्कदिक्क भएका थिए। उनीहरु स्थिरता चाहन्थे, निर्वाचन परिणाम जस्तो आयो, त्यो जनताको त्यही चाहनाको अभिव्यक्ति हो। स्थिरता सहितको सम्बृद्धितिर जाने जुन राष्ट्रिय एजेण्डा छ, त्यसलाई यसैले सम्बोधन गर्छ कि भनेर जनताले वामगठबन्धनलाई मत दिएका छन्। तर उनीहरु कसरी जान्छन् भनेर हेर्न चाहिँ बाँकी नै छ।
मेरो त वामगठबन्धनलाई शुभकामना नै छ। किनभने, सम्बृद्धिका लागि स्थिरता चाहिन्छ भन्ने मान्छे हुँ। अहिलेको शासकीय स्वरुपले दीगो स्थिरता दिँदै दिँदैन। स्थिरता र सवृद्धि का लागि संसदलाई पूर्ण समानुपातिक बनाइनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ। यो मान्यताप्रति म अहिलेपनि अडिग छु।
यही संविधान अन्तर्गत गर्ने हो भने, त्यसका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्‍यो। संविधान संशोधन नहुँदासम्म गठबन्धन निर्माण गरेर, बहुमत ल्याएर स्थायी सरकार दिनु एउटा राम्रो विकल्प त हो। तर, उहाँहरु कसरी जानुहुन्छ, त्यो हेर्न चाहिँ बाँकी छ।
समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणामपनि आइनसक्दै कांग्रेसको तर्फबाट ‘प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ’ भन्ने कुरा आउन थाल्यो। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
हामीकहाँ राजनीतिक मूल्यमान्यताको खडेरी छ। त्यसैले, हामीले वैकल्पिक राजनीतिक धारको मान्यतालाई अघि सारेका हौं। हाम्रो धारणा के हो भने, राजनीतिलाई नैतिक धरातलमा उभ्याएर अघि जानुपर्छ, सुशासन र सदाचारयुक्त राजनीति गर्नुपर्छ।
तर, विगतको परम्परा हेर्दा आगामी दिनमा पनि ढुक्क हुनसकिने स्थिति छैन। सामान्यत: चुनावपूर्व बनेको गठबन्धनको मान्यताभित्र रहेर नै सरकार बनाउने भन्ने आम परम्परा हुन्छ। तर, चुनाव हुनेवित्तिकै त्यसलाई तोडेर अर्काेतिर जाने भन्ने कुरा कसैले गर्छ भने त्यो भन्दा अनैतिकता केही पनि हुँदैन।
आखिर बहुमत कसैको छैन, पाँच वर्षसम्म के के खेल हुने हो, भन्न सकिन्न। तपाईंलाई नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आयो भने के गर्नुहुन्छ?
अहिलेको संसद रहेसम्म कुनैपनि हालतमा सत्तामा जान्नँ। म सत्ताको आकांक्षी छैन। म सत्तामुखी र अनैतिक राजनीति गर्दिनँ। मैले वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गरेको छु। अहिले प्रधानमन्त्रीको कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। कसैले ‘तपाईं प्रधानमन्त्री बन्ने हो?’ भनेर सोध्यो भनेपनि म ठाडै दुत्कार्छु।
राजनीति वाम र गैरवाम ध्रुबमा केन्द्रित भएका बेला बीचको बाटोका लागि आफ्नो आवश्यकता देख्नुहुन्न?
यस्तो प्रस्ताव नै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरित छ। हामी त वैकल्पिक राजनीतिको बीउ मात्र उमार्दैछौं। अहिले नै सत्तामा जाने, चलखेल गर्ने काममा लाग्छौं भने त्यो पुरानै राजनीतिको पुनराबृत्ति हुन्छ।
प्रसङ्ग बदलौं। पहिलेको र अहिलेको चुनावी प्रतिस्पर्धाका अनुभव के कस्ता रहे?
मैले प्रतिस्पर्धा गरेकामध्ये अघिल्ला दुई चुनाव संविधान सभाका थिए। क्रान्तिपछि जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाउन मुद्दा केन्द्रित चुनाव थिए ती। त्यसैले, ती निर्वाचनमा राजनीतिक मुद्दा बढी प्रभावकारी भए। तर, संविधान निर्माणपछि हामी संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्‍यौं। यो सरकार निर्माण गर्ने निर्वाचन भएकाले अहिले प्रतिस्पर्धा अलिक अस्वस्थ किसिमको भयो। सिद्धान्त, मूल्य मान्यता भन्दा निजी र दलीय लाभको विषय केन्द्रमा पर्‍यो।
हाम्रो अर्थतन्त्र जसरी राज्यसँग जोडिएको छ, जसलाई ‘क्रोनिक क्यापिटलिजम्’ (आसेपासे पूँजीवाद) भनिन्छ। यो भनेको राज्यसत्ताबाट लाभ लिएर निजी क्षेत्र फस्टाउने, अनि तिनै व्यवसायीको लाभ लिएर चुनावमा बढी खर्च गर्ने प्रबृत्ति हो। यही प्रबृत्तिका कारण चुनावमा पैसाको अलिक बढी खर्च भएको मैले देखें।
तपाईंको क्षेत्रमा पनि त्यही देखियो?
सबैतिर त्यही देखियो। राजनीतिक मूल्य–मान्यताको ख्याल गर्ने होइन, पैसाको चलखेल बढी देखियो। मानिसहरु तत्कालको लाभमा बढी दौडन खोजे। यो प्रबृति लोकतन्त्रका लागि दुखद पक्ष हो।
विचार र राजनीतिमा आधारित नभई निजी र समूहगतका लागि लाग्ने र आर्थिक लाभका प्रलोभनमा पर्ने भइसकेपछि त चुनाव स्वतन्त्र, निश्पक्ष हुँदैन। तर हाम्रो लोकतन्त्र त्यतैतिर जाँदै गरेको मैले देखें।
चुनावमा ‘मलाई यति पैसा देऊ अनिमात्र भोट दिन्छु’ भन्दै पनि आए?
आमरुपमा नै भन्नुपर्दा कस्तो प्रबृति देखापर्‍यो भने, खासगरी अहिले सत्तामा रहेका अलिक बलिया पार्टीहरुले साधन–स्रोतको अत्यन्त बढी दुरुपयोग गरे। अत्यन्त बढी खर्च गरिदिने, त्यसले गर्दा कार्यकर्ता र जनताको स्तरसम्मपनि आर्थिक लाभको लागि चलखेल गर्ने प्रबृति देखियो।
तैपनि गोरखाली जनताले मलाई मायाँ गर्नुभयो, हिजो मैले जेजति सेवाको प्रयास गरेको थिएँ, त्यसका आधारमा मलाई जिताउनुभयो। यस हिसावले म आफैं ले त धेरै कठिनाई बेहोर्नु परेन। तर, आर्थिक चलखेलको प्रबृत्ति धेरै भएको देखें।
त्यही कारणले हो कि, चुनाव परिणाम आएपछि अलिक ‘फ्रेस’ हुन परिवारसहित गोकर्ण रिसोर्ट पुग्नुभएको पनि?
चुनाव होस् वा कुनै सामाजिक–राजनीतिक अभियान, यस्ता अभियान सकिएपछि २–४ दिन ‘ब्रेक’ लिने, आत्मसमीक्षा गर्ने र अध्ययन गरेर आफूलाई फ्रेस बनाउने मेरो पहिल्यैदेखिको बानी हो।
गोकर्ण रिसोर्टमा जाँदा ‘सेभेन हभिट्स् अफ हाइली इफेक्टिभ पिपुल’ पुस्तक लिएर जानु भएको रहेछ। चुनाव लगत्तै अध्ययनका लागि त्यो पुस्तक छनोट गर्नुको कुनै विशेष कारण थियो कि?
२–३ वटा किताब सँगै पढ्दै थिएँ। संयोगले त्यहाँ जाँदा त्यो किताब पर्‍यो। मानिसको व्यक्तित्व विकास र क्षमता अभिवृद्धि , प्रभावकारिता वृद्धि गर्न के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो पुस्तकमा छ।
व्यक्तित्व विकासका सन्दर्भमा अरु किताब बढी आदर्शमा आधारित छन्। तर यो किताब विज्ञानमा आधारित छ। यो किताब धेरै चर्चित पनि छ। विश्वका धेरै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले यो किताब अध्ययन गर्ने गरेका छन्। यो पुरानै किताब हो, २५वर्ष भैसक्यो निस्केकोपनि। तर यसपटक फेरि दोहोर्‍याएर पढ्न चाहें।
दोस्रो किताब पनि पढें, ‘द ब्रेन’ भन्ने। त्यसमा मान्छेको मस्तिष्कको बनोट र चेतनाको विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुरा छ। वैज्ञानिक र सरल भाषामा लेखिएको पुस्तक छ यो। यो चाहिँ भर्खर निस्केको पुस्तक हो।
भर्खर पढेको तेस्रो किताब चाहिँ ‘डेभलपमेन्ट अफ क्यापिटलिजम्’ हो। अर्थराजनीति सम्बन्धी यो किताबले सन् १५०० देखि २००० सम्म ५ सय वर्षभित्रको अवधिमा पूँजीवादको विकास कसरी भयो भन्ने कुराको राम्रो व्याख्या गरेको छ। यो किताब किन पढें भने, नेपाल सामन्ती युगबाट भर्खर पूँजीवादी युगतिर प्रवेश गर्दैछ।
सामन्तवादको अन्त्य गरेर युरोप–अमेरिकामा औद्योगिक क्रान्ति कसरी भयो, कुन कुन तत्वले त्यसमा भूमिका खेलेको थिए भन्ने कुरा त्यसमा छ। नेपालमा हामीले तीब्र आर्थिक विकास र सम्बृद्धिको कुरा गरेका छौं। त्यसैले उनीहरुको अनुभव हाम्रा लागि पनि सान्दर्भिक होला भनेर त्यो किताब पढेको हुँ।
चुनावपछि हो तीनै किताब पढ्नु भएको?
मेरो बानी के छ भने, एउटा किताब पढ्न थाल्छु, पढिनसक्दै त्यसलाई राख्छु र अर्काे पढ्न थाल्छु। यसरी २–३ वटा किताब सँगसँगै जस्तो पढेर सिध्याउँछु।
पहिलो र दोस्रो चुनावमा तपाईंले विजय हासिल गर्दा तपाईंसँग ‘सबैभन्दा धेरै मत र मतान्तरपनि ठूलो’ भन्ने ‘ताज’ थियो। यसपटकको जितमा त्यो ताज रहेन। कस्तो लाग्यो?
त्यो बेला एउटा लहर थियो। क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि हामी शान्ति प्रक्रियामा आएका थियौं। संविधान सभाको चुनाव हुँदै थियो। संविधान सभाका लागि माओवादी पार्टीभित्र सबैभन्दा बढी संघर्ष मैले नै गरेको थिएँ। माओवादीलाई शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा ल्याउन पनि मेरो महत्वपूर्ण भूमिका थियो। फेरि गोरखा मेरो जन्मथलो र कार्यथलो पनि थियो। त्यसैले, पहिलो चुनावमा मैले अत्याधिक मतले जितें। लहर अनुसार नै चुनावमा गएकाले मैले जितें।
दोस्रो चुनावमा लहर अल्लि कम थियो। तरपनि अरुले भन्दा धेरै मतान्तरका साथ चुनाव जितें। किनभने, दोस्रोपनि संविधानसभाको चुनाव थियो।
यसपटकको तेस्रो चुनावचाहिँ मेरालागि ‘एन्टी करेन्ट’ भयो। लहर अर्काेतिर थियो। यो चुनाव सत्ताका लागि भएको थियो। को सत्तामा जाने, कसले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने भन्ने कुराका लागि चुनाव भएको थियो। हामी त्यो लहरमा थिएनौं।
फेरि यसपटक दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी गठबन्धन बनाएर चुनावमा गए। उनीहरुको पक्षमा देशव्यापी लहर आयो। यस्तो बेला नयाँशक्तिको पार्टीको तर्फबाट मैले भर्खर नयाँ सुरुवात गर्दै थिएँ। यस्तो ‘एन्टी करेन्ट’ को स्थितिमा चुनाव लड्दा पहिलो र दोस्रो चुनावमा जस्तो मत नपाउनु स्वभाविक थियो।
फेरिपनि गोरखाली जनताले जुन मायाँ र विश्वास मलाई गरेर मलाई जिताउनुभयो, त्यसप्रति म आभारी छु।
यो चुनावका सन्दर्भमा तपाईंमाथि दुई आरोप छन्। एक, कांग्रेसको सहयोग लिएर गोरखा–२ मा आफूले त चुनाव जित्नुभयो। तर गोरखा–१ मा चाहिँ कांग्रेसलाई जिताउन सहयोग गर्नुभएन। दुई, आफ्ना लागिमात्र गोरखा–२ मा तालमेल गर्नुभयो, पार्टीका अरु साथीका लागि कतै तालमेल गरिदिनुभएन। यी आरोप सही नै छन् नि, होइन?
राजनीतिमा अलिअलि आरोप लाग्नु स्वभाविक हो। तर, यी आरोपहरु सत्य चाहिँ होइनन्।
हामीले कांग्रेससँग तालमेल दुईवटा जिल्लामा मात्र गरेका हौं। अन्य जिल्लाहरु जस्तैः कैलाली, कपिलवस्तुमा पनि गरौं भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो। तर, कांग्रेसका साथीहरुले मान्नु भएन। कैलालीमा तालमेल गरेको भए कांग्रेसले पनि जित्न सक्थ्यो, नयाँ शक्तिले पनि जित्थ्यो।
हामीले कैलाली–३ ‘क’ मागेका थियौं। त्यहाँ हाम्रो भोट साढे ५ हजार आयो, कांग्रेसको सात हजार आयो। वामगठबन्धनका उम्मेदवारले ११ हजार ल्याएर जित्नुभयो। हामी त्यहाँ मिल्न सकेको भए साढे १२ हजारको हाराहारीमा मत आउँथ्यो। कपिलवस्तु–१ मा पनि त्यस्तै भयो। त्यहाँ हामी र कांग्रेस मिलेर लडेको भए सहजै जितिन्थ्यो।
त्यस्तो प्रतिकूल स्थितिमा पनि कांग्रेसले तालमेल गर्न किन नमालेको होला?
नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गर्ने निपुर्णता रहेनछ। एमाले र माओवादीमा त्यो निपुर्णता छ। विशेष गरी एमाले त अझ सम्पूर्ण हिसाबकिताब गरेर, कहाँ तालमेल गर्दा कस्तो असर गर्छ भन्ने हेरेर तालमेल गर्न सिपालु रहेछ। माओवादी केन्द्रसँग चुनाव तालमेल र निर्वाचन परिणामले यही देखायो। तर कांग्रेसका साथीहरुचाहिँ त्यति सिपालु हुनुहुँदो रहेनछ।
हामीपनि नयाँ थियौं। धेरैतिर हाम्रो दावी पनि थिएन। तर केहि ठाउँहरु भनेका थियौं, अहिले चुनावको परिणाम हेर्दा ठीकै भनेका रहेछौं भन्ने लाग्छ।
जहाँसम्म गोरखाको कुरा हो, गोरखा–१ का तीनवटै क्षेत्र उहाँ (कांग्रेस) हरुले लिनुभयो। गोरखा–२ मा प्रदेशसभा चाहिँ हामीले एक–एकवटा बाँड्यौं। त्यसैले, गोरखा–२ मा कांग्रेस र हामीले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सबै जित्यौं। गोरखा–२ मा सफल भएपनि गोरखा–१ मा हामी सफल भएनौं। जित्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर सकिएन। रसुवामा गरिएको तालमेल चाहिँ सफल भयो।
तपाईं ‘आश्चर्यजनक’ ढंगले वामगठबन्धन छाडेर कांग्रेससँग तालमेल गर्न पुग्नुभयो, यसको भित्री कारण के थियो?
वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउनै भनेर नयाँशक्ति गठन गरेका हौं। नयाँ ढंगको समाजवादी शक्ति वा वामलोकतान्त्रिक शक्ति अथवा सामाजिक–लोकतान्त्रिक शक्ति जे भनेपनि नयाँ शक्ति आवश्यक छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।
म अहिलेपनि परम्परागत पूँजीवाद, नवउदारवाद र स्टालिनवादी साम्यवाद दुईवटै मोडलले नेपालमा काम गर्न सक्दैनन् भन्ने ठान्छु। त्यसभन्दा माथि उठेको सामाजिक–लोकतान्त्रिक वा वाम–लोकतान्त्रिक अथवा नयाँ ढंगको समाजवादी विचारमा आधारित शक्ति नै नेपालको विकल्प हो भन्ने मलाई अहिलेपनि लाग्छ। हामी त्यही अभियानमा लागेकै हो।
सुरुमा एमाले–माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता भन्ने कुरा थिएन, तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो। तर तालमेल गर्दै जाने भन्नेक्रममा अकस्मात माओवादी केन्द्र र एमालेले पार्टी एकताकै कुरा गरिहालेछन्। हामीलाई पनि अकस्मात एकतामा सामेल हुने प्रस्ताव आयो। त्यसैले, हामीले हतार–हतार १७ असोज (०७४) मा एकतामा सामेल हुने भन्ने निर्णय लियौं। उहाँहरुको समझदारी ‘कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउनुपर्छ’ भन्ने रहेछ। हाम्रो भनाइचाहिँ ‘कम्युनिष्ट केन्द्र होइन, समाजवादी केन्द्र बनाउँ’ भन्ने थियो।
अनौपचारिक कुराकानीमा केपी ओलीले ‘समाजवादी केन्द्र नै बनाउने हो, म पनि त्यसैको पक्षमा छु, जाने त्यतै हो, अहिले हतारहतारमा भएर यस्तो हुन पुगेको हो’ भन्नुभएको थियो। प्रचण्डजीले पनि पहिल्यैदेखि ‘अब अल्लि नयाँ ढंगले जानुपर्छ’ भनिरहनुहुन्थ्यो।
यी कुराहरुको आधारमा मैले सहजरुपमा विश्वास के गरें भने, ‘जिम्मेवार साथीहरुले त्यसो भनिसकेपछि शायद रुपान्तरण सहितको समाजवादी शक्ति बन्नेतिरै यो जान्छ, त्यसैले यो प्रयास ठीकै छ, यो वाम लोकतान्त्रिक शक्ति नै हो।’ यसै आधारमा ‘हुन्छ, हामीपनि सहमत छौं’ भनिहालें। किनभने, हामीलाई बैठक गर्ने र छलफल गर्ने समय थिएन। पार्टीका उपलब्ध साथीहरुसँग छलफल हुँदापनि उहाँहरुले ‘ठीकै छ नि त’ भन्नुभयो। त्यसै आधारमा निर्णय गरियो।
तर उहाँ (ओली–प्रचण्ड) हरुको पार्टीभित्र त्यो खालको समझदारी बनिसकेको रहेनछ। ‘नयाँशक्तिसँग अहिले चुनावी तालमेलमात्र गर्ने, चुनावपछि आफ्नै ढंगले पार्टी एकता गर्ने’ भन्ने कुरा रहेछ। पार्टी एकतामा नयाँशक्तिलाई सामेल गर्ने भन्ने कुराको एमाले–माओवादी केन्द्रभित्र तुरुन्त ‘रियाक्ट’ भइहालेछ। हामीलाई अकस्मात संलग्न गराएकोमा त्यहाँभित्र प्रतिरोध नै भएछ।
यस्तो भएको एमालेभित्र हो कि माओवादी केन्द्रभित्र हो?
बढी ‘रियाक्ट’ भएको चाहिँ माओवादी केन्द्रभित्र हो। एमालेको पनि एउटा सेक्सनले हामीलाई एकतामा सहभागी गराउने कुराको विरोध गरेको भन्ने कुरा ओलीजीबाट जानकारी पाएँ। उहाँले त्यसो भनेपछि हामीले ‘मिलाउनका लागि केही दिन लिनुस् न त’ भनेका पनि हौं।
तर उहाँहरुले मिलाउन सक्नुभएन। त्यसपछि ‘ठीकै छ, तपाईंहरुले मिलाउन सक्नुभएन भने हामी त यसैपनि फरक धार लिएर हिँडेका मान्छे हौं, भोलिका लागि सबै राजनीतिक सम्भावनाहरु खुला हुन्छन्, अहिले हामी अलग नै रहन्छौं’ भनेर सौहार्दपूर्ण रुपमा नै अलग भयौं।
खास नमिलेको त गोरखा–२ र अन्य क्षेत्रमा टिकट बाँडफाँटको कुराले होइन र?
टिकटको विषय त गौण हो। मुख्य विषय नै नमिलिसकेपछि टिकटको कुरा त गौण विषय भयो। उहाँहरुले एकतामा नै संलग्न गराउन नचाहेपछि चुनावमा तालमेल गर्ने भन्ने कुरै आएन।
गोरखा–२ मात्र होइन, कुनैपनि ठाउँमा तालमेल गर्ने भन्नेमा उहाँहरु जाँदै जानुभएन। हामीसँग ‘तालमेल नगर्ने’ भन्नुभयो उहाँहरुले।
८–१० दिन तालमेलकै लागि भनेर पर्खेर बस्नुभयो। कस्तो लाग्यो?
हो, ८–१० दिन पर्खियौं। तर उहाँहरुले कुनै ‘रेस्पोन्स’ नै गर्नुभएन। केपी ओलीजीले अन्त्यमा भन्नुभयो, ‘इमानदारितापूर्वक मैले प्रयत्न गरें। तर साथीहरुलाई मनाउन सकिनँ।’
उहाँको भनाई के थियो भने, ‘माओवादीका तपाईंका पुरानै साथीहरुको प्रतिरोध बढी भयो।’ त्यसो भनिसकेपछि हामीले पनि जबर्जस्ती गर्ने कुरा भएन।
तर तपाईंहरुले प्रतिनिधि सभाका २८ सिटमा दावी गर्नुभएको रहेछ। अनि कसरी कुरा मिल्छ त?
प्रस्ताव त आ-आफ्नो हुन्छ। कुराकानी सुरु भएपछि पहिलो दिन नै ‘कहाँकहाँ नयाँशक्तिको सम्भावना छ त?’ भन्ने छलफल भएको थियो। हामीले ‘गोरखा, रसुवा, कैलाली, कपिलवस्तु, सप्तरी लगायतका जिल्लामा हाम्रो जीतको सम्भावना छ’ भनेका थियौं।
तर, हामीसँग एकता नगर्ने भनेपछि टिकटको प्रकृया नै अघि बढेन। उहाँहरुकै तर्फबाट एकता प्रक्रिया खारेज गरेपछि त कुरा टुंगिहाल्यो। त्यसैले, सिट बाँडफाँट र गोरखा–२ लाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको भन्ने कुरा गलत हो।
यो चुनावले तपाईंलाई खुसी बनाएको छ कि दुखी? किनभने, आफूले गोरखा–२ मा शानदार जीत हासिल गरेपनि नयाँ शक्ति नेपाल चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन…
‘थ्रेसहोल्ड’ को प्रावधानले गर्दा ‘राष्ट्रिय पार्टी’ भन्ने शब्द प्रयोग भयो। तर राजनीतिमा कुनैपनि राजनीतिक पार्टी राष्ट्रिय र अराष्ट्रिय भन्ने हुँदैन। हो, हामीले ‘थ्रेसहोल्ड’ सम्म पार गरेको भए राष्ट्रिय रुपमा प्रभावकारी भुमिका खेल्न सक्थ्यौं, त्यो स्थितिमा हाम्रो मनोविज्ञान नै फरक हुन्थ्यो। थ्रेसहोल्ड पार गर्न सकेको भए अर्को निर्वाचनसम्म वैकल्पिक धारलाई राम्रोसँग अघि बढाउन सक्छौं भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो।
त्यसका निम्ति प्रत्यक्षतर्फ केही सिट जित्नु पथ्र्यो, हामी त्यसमा लाग्यौं। गोरखा र रसुवामा जित्यौंपनि। तर समानुपातिकमा ‘थ्रेसहोल्ड’ सम्म कटाउन सकिएला भन्ने हाम्रो प्रयत्न चाहिँ सफल भएन। यो हाम्रा लागि दुखद पक्ष हो। तैपनि लोकतन्त्र हो, जनताको अभिमतको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। जस्तो परिणाम आएको छ, हामीले यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्छौं।
दशरथ रंगशालाबाट पार्टी घोषणा गर्दा नयाँशक्तिको पक्षमा उभार नै देखिन्थ्यो। तर कहाँनेर के गल्ती भयो र अहिलेको दुःखद परिणाम आयो?
हामी पुरै असफल भयौं भन्ने त मलाई लाग्दैन। कम्तिमा प्रदेशसभामा २ वटा र प्रतिनिधिसभाको एउटा सिटमा हाम्रो प्रतिनिधित्व भएको छ। वैकल्पिक धारलाई अघि बढाउन प्रादेशिक र केन्द्रीय संसदमा नीति नियम निर्माणका क्रममा हस्तक्षेप गर्ने र विचार राख्ने मञ्च हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो केहि उपलब्धि त हो। तर यो भन्दा बढी उपलब्धि हामीले प्राप्त गर्न सकेनौं।
किन हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सकेनौं भन्ने कुराको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक बोलाएर बिस्तृत समीक्षा गर्छाैं। तर मेरो प्रारम्भिक बुझाई के छ भने, वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माण गर्न ‘पाँच स’ को जुन आधार अघि सारेका थियौं, त्यसले जनतामा ब्यापक आकर्षण पैदा गरेको थियो। तर पर्याप्त तयारीबिना चुनावमा जानुपर्दा हाम्रो बाटो नै ‘जिकज्याक’ भयो।
पहिले वैकल्पिक राजनीतिक धार भन्नुहुन्थ्यो, तर आफूले प्रतिस्पर्धा गरेको गोरखा–२ (पहिलो चरण) को चुनाव सम्पन्न भएपछि ‘वाम–लोकतान्त्रिक’ धारको कुरा गर्न थाल्नुभयो। गोरखा–२ मा कांग्रेसीले आफूलाई भोट नहाल्लान् कि भनेर ‘वाम–लोकतान्त्रिक’ धारको कुरा सुरुमा लुकाउनु भएको हो?
होइन। वैकल्पिक राजनीतिक धारमा हाम्रो सैद्धान्तिक आधार वाम–लोकतान्त्रिक धार भनेका छौं। समावेशी, समानुपातिक र सहभागीतामुलक लोकतन्त्र नै अबको उन्नत लोकतन्त्र हो भन्ने हाम्रो धारणा छ। यो कुरा हामीले कहिलेपनि लुकाएका छैनौं।
‘वाम’ भन्ने विषयवस्तुमा–के के पर्छ, ‘लोकतान्त्रिक’ भन्ने विषयमा चाहिँ के के?
समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक यी तीनवटा पक्ष समावेश भए भने लोकतन्त्रको मूल पक्ष हुन्छ। अग्रगामी, प्रगतिशील, जनपक्षीय र उत्पीडित समुदायको हित गर्ने चरित्रलाई हामीले वाम पक्ष भनेका छौं। लोकतन्त्र त लोकतन्त्र हो, तर अल्लि अग्रगामी, प्रगतिशील र जनपक्षीय लोकतन्त्र हामीलाई चाहिन्छ भन्ने हाम्रो जोड हो।
लोकतन्त्रका दुईवटा धार छन्। एउटा नवउदारवादी लोकतन्त्र, जसले निजी स्वतन्त्रता, निजी हक–अधिकारलाई बढी जोड दिन्छ। यसलाई ‘पूँजीवादी लोकतन्त्र’ पनि भन्न सकिन्छ। अर्को समाजवादी लोकतन्त्र, जसले सामाजिक हित, वर्गीय हित र उत्पीडित समुदायको अधिकारको कुरा बढी गर्छ।
तर, नेपालको सन्दर्भमा यी दुईवटामध्ये एउटामा मात्र लाग्ने छुट हामीलाई छैन। हामीकहाँ जुन वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक विभेद छ, जुन पिछडिएको अवस्था छ, त्यसैका आधारमा हामीले वाम–लोकतन्त्र भनेका हौं।
मुलतः लोकतन्त्र, तर वामतर्फ ढल्किएको लोकतन्त्र नै नेपालको अहिलेको आवश्यकता हो। र, यसको अन्तिम लक्ष्यचाहिँ समाजवादउन्मुख नै हुनुपर्छ। हामीले संविधानमा पनि ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर उल्लेख गरेका छौं। त्यसैले हामीले वाम लोकतन्त्र हुँदै समाजवादसम्म जाने बाटो नै नेपालका लागि वैकल्पिक राजनीतिक बाटो हो भनेका छौं।
गोरखा–२ को चुनावी अभियानमा ‘कांग्रेससँगै पार्टी एकतापनि हुनसक्छ’ समेत भन्दिनुभयो। खासमा यो कुरा चुनावी रणनीति अनुरुप भन्नु भएको हो कि उसकै सहयोगमा चुनाव जितेपछि साँच्चिकै कांग्रेससँग पार्टी एकता नै गर्ने सुर पनि हो?
गोरखा–२ को एउटा सभामा नेपाली कांग्रेसका एकजना नेताले भन्नुभयो, ‘अब नेपाली कांग्रेसलाई नै नयाँ बनाउनु पर्‍यो, यसैलाई नयाँ शक्ति बनाउनु पर्‍यो र डाक्टर सा’ब पनि कांग्रेसमा आउनुपर्‍यो।’
त्यसपछि मैले पनि ठट्यौलीको रुपमा ‘नेपाली कांग्रेस नयाँ शक्तिमा रुपान्तरण हुन सक्छ र चाहन्छ भने यो त खुसीको कुरा हुन्छ। हामीले त नयाँ शक्ति निर्माण गर्न खोजेका छौं। नेपाली कांग्रेस नै रुपान्तरित हुन्छ भने त त्यतिबेला सोच्न सकिन्छ’ भनेको हुँ।
फेरि कांग्रेससँग चुनावी सहकार्य थियो। सहकार्य गरेको पार्टीका नेताले त्यस्तो प्रस्ताव राखेपछि त्यसैअनुसारको जवाफ दिनु अन्यथापनि होइन। तर, मैले त्यो बेला पनि नयाँशक्तिको मान्यताभित्रै रहेर जवाफ दिएको थिएँ।
म के भन्छु भने, नेपाली कांग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको जुन प्रतिवद्धता छ, त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ। म आफू १२ बुँदे समझदारी यताको मुख्य नीति निर्माता मध्येको एक हुँ। यस नाताले पनि नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यको महत्व मलाई राम्रोसँग थाहा छ। नेपाली कांग्रेसबिना १२ बुँदै समझदारी, शान्ति प्रकृया, संविधान निर्माण गार्‍हो हुन्थ्यो। यस हिसाबले पनि नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यलाई महत्व दिएको हुँ, दिनुपनि पर्छ।
यस पटकको चुनावमा तपाईंले कांग्रेससँग अन्तरक्रिया गर्न पाउनुभयो, पार्टीमै रहेर नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई भोग्नु पनि भयो। यस अनुभवको आधारमा, व्यवहार गर्न कोसँग सजिलो हुँदो रहेछ?
व्यवहारमा सहज त मैले कांग्रेसलाई नै देखें। उहाँहरुसँग लोकतान्त्रिक संस्कारको लामो अनुभव छ। उहाँहरु उदारवादी, निजी स्वभावलाई सम्मान गर्नुहुन्छ, खुल्ला ढंगले आफ्ना कुरा राख्ने गर्नुहुन्छ।
वामपन्थीहरुबाट सिक्नुपर्ने चाहिँ काम गर्ने प्रणाली हो। वामपन्थीहरु योजनावद्ध रुपले काम गर्छन्। संगठित र योजनावद्ध ढंगले काम गर्ने शैलीचाहिँ नेपाली कांग्रेसमा देखिनँ। त्यहाँ व्यक्ति–व्यक्तिको समूह त छ। तर पार्टीगत र समूहगत रुपमा काम गर्ने व्यवस्थित रुप चाहिँ छैन।
म के भन्छु भने, नेपाली कांग्रेसको खुलापन, सहयोगीपन, सहृदयता, अनि कम्युनिष्टहरुको व्यवस्थित, प्रणालीगत र संगठित ढंगले अगाडि बढ्ने शैली सबैले सिक्नुपर्छ।
वाम, लोकतान्त्रिक र मधेशी गठबन्धनको बीचमा संसदमा तपाईं एक्लो बृहस्पति हुनुहुन्छ। एक्लै हिँड्दा अप्ठेरोपनि होला। त्यसैले, संघीय समाजवादी फोरमसँगको एकता प्रक्रियालाई ब्युँझाउने योजनामा हुनुहुन्छ कि?
हो, अबको संसदमा तीनवटा प्रवृत्ति देखापर्ने भयो। नेपाली कांग्रेसको उदारवादी लोकतन्त्रको धार, वामगठबन्धनको सामाजिक न्यायमुखी धार र उत्पीडित जनताको पक्षमा काम गर्ने अर्को धार, जसको पक्ष मधेसवादीहरुले लिएका छन्।
हाम्रो भनाई के छ भने, लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिन यी सबै कुरा चाहिन्छन्। लोकतन्त्रपनि चाहिन्छ, सामाजिक न्यायपनि चाहिन्छ र नेपालको विशिष्टतामा उत्पीडित जातिहरुको मुक्ति र पहिचान साथै अधिकारको जुन सवाल छ त्यो पनि चाहिन्छ।
‘पाँच स’ भनेर हामीले यी सबैकुरा भनेका छौं। त्यसैले, संसदमा यी तीनवटै शक्तिहरुसँग सहकार्य गर्ने र नेपालको विशिष्टतामा नयाँ राजनीतिक धार निर्माण गर्ने प्रयत्नमा म लाग्नेछु। अर्थात् मेरो जोड वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माणमै हुन्छ।
यति हुँदाहुँदैपनि मुद्धाका आधारमा कांग्रेससँग लोकतन्त्र, विधिको शासन जस्ता कुरामा सहकार्य गर्न सकिन्छ। सामाजिक न्यायको पक्षमा वामपन्थी गठबन्धनसँग सहकार्य गर्न सकिएला। हिमाल, पहाड र तराईको एकता साथै जातीय मुक्तिको प्रश्नमा मधेसवादी दलसँग सहकार्य होला। मुद्दाका आधारमा सबैसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने नै मेरो प्रयत्न हुन्छ। तर नयाँशक्तिलाई स्थापित गर्ने कुरा नै मेरो प्राथमिकता हुनेछ।
यति ठूलो राजनीतिक ध्रुवीकरणका बीच तपाईंको अभियान सफल होला त?
यो ध्रुवीकरण त क्षणिक हो भन्ने लाग्छ।
नेपालमा मुख्यरुपमा तीनवटा जटिलता छन्। एक, भुराजनीतिक जटिलता। जस्तो कि, अलग–अलग प्रणाली अपनाएका प्रतिस्पर्धी दुईवटा ठूला छिमेकीका बीचमा छौं हामी। यो भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गर्ने जटिलतालाई ठीक ढंगले व्यवस्थित गर्न सकेनौं भने मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र सवृद्धि को दिशामा अगाडि बढ्न हामीलाई कठिन हुन्छ। यो पाटोलाई हामीले विशेष ध्यान दिनैपर्छ। यसमा पुराना राजनीतिक शक्तिहरुले कति ध्यान दिन्छन्, त्यो हेर्नुपर्ने विषय छ।
दुई, अर्थराजनीतिक जटिलता। हामी भर्खरै सामन्तवादी र निर्वाहमुखी पूँजीप्रधान अर्थतन्त्रबाट सेवामूलक औद्योगिक अर्थतन्त्रतर्फ अर्थात् ‘पूँजीवादी अर्थतन्त्र’ तर्फ उन्मुख हुँदैछौं। व्यापक रुपमा स्वदेशी र विदेशी पूँजीको परिचालनसँगै सामाजिक न्याय र वितरणको सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्छ। सकिएन भने उपयुक्त विकास नीति आउन सक्दैन। नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धनले नेपाल सुहाउँदो आर्थिक नीति लिन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो स्थितिमा हाम्रो महत्व बढी हाल्छ।
तीन, नेपालको सामाजिक–सांस्कृतिक जुन विविधता छ, अथवा जातीय–क्षेत्रीय जुन विविधता छ, त्यसको सम्बोधन नगरेसम्म देशमा दीगो शान्ति हुँदैन। त्यसमा पुराना शक्तिहरु सफल हुनेछन् भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले कमजोर बनेपनि एकाध वर्षपछि उपरोक्त मुद्दाहरु फेरि मुखरित भएर आउनेछन्। र, त्यसबेला वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता पर्छ।
राजनीतिक स्थिरताको विषयलाई भुराजनीतिसँग जोड्नुभयो।भूराजनीतिक शक्तिहरुले वामगठबन्धनको सरकारलाई टिक्न दिँदैन भन्न खोज्नु भएको हो?
बाह्य शक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थ हेर्छन्, आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलखेल गर्छन्। यो अहिलेमात्र होइन, हजारौं वर्षदेखि हुँदै आएको कुरा हो। यो कुरा आज पनि छ र भोलिपनि हुन्छ। तर देशभित्रका जो–जो मुख्य कर्ताहरु हुन्, उनीहरुले भूराजनीतिको जटिलता बुझेर ठीक ढंगले राष्ट्रिय हितमा उपयुक्त नीतिहरु लिन सक्नुपर्छ। त्यसो गर्न उहाँहरु सक्नुहुन्न कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ छ।
कांग्रेस नेतृत्वमा गैर वामपन्थी शक्ति, एमाले नेतृत्वमा वामपन्थी शक्ति गोलबन्द हुने क्रम अरु बढ्यो भने, नयाँशक्ति चाहिँ कसरी फस्टाउँछ त?
उहाँहरु मिलेर जानुभयो, देशलाई विकास र सम्बृद्धिको दिशातर्फ लैजानपनि सफल हुनुभयो, दिगो शान्ति र स्थायित्व, सुशासन, विकास पनि दिनुभयो भने हामीले टाउको दुखाउनु पर्छ र?
तर उहाँहरुको विगत, चरित्र र लिएको वैचारिक–राजनीतिक लाइन हेर्दा त्यसो गर्न शायद सक्नुहुन्न। त्यही कारणपनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता र औचित्य रहिरहन्छ।
ट्याग: #डा. बाबुराम भट्टराई